Trump Oo Ku Wareeray Sidii Uu U Daawaneyey TV-yada Ka Dib Markii Uu Arkay Siday Wax U Socdaan – Borama News Network
Trump Oo Ku Wareeray Sidii Uu U Daawaneyey TV-yada Ka Dib Markii Uu Arkay Siday Wax U Socdaan
Donald Trump ayaa ka cadhooday, kana xumaaday in dad kooban ay u soo baxaan taageeradiisa xilli uu ka daawanayey TV-ga ama waddooyinka, ilo ku dhow madaxweynaha ayaa u sheegay CBS News.
Trump ayaa rajeynayey in taageerayaal badan uu ku haysto Maraykanka kuwaas, oo siin doona codkooda dhanka kalena dartii u muddaharaadi kara.
Waxay yidhaahdeen wuxuu daawanayay TV-yo badan, wicitaano ayuu sameynayay, wuxuuna waqtigiisa Jimcaha u kala qeybinayay Xafiiska Oval iyo hoygiisa.
In kasta oo kooxda ololaha Trump ay muujinayaan dagaalkiisa sharciga ah, ma jiraan istiraatiijiyad cad o ay goor ka lahaayeen arrintan. Qaar ka mid ah kaaliyayaashu waxay qirayaan in waxaas oo dhami ay ahayd in laga fikiro bilo ka hor, laakiin cidina ma rabin inay wadahadal la yeelato madaxweynaha.
Sida talaabooyinka xiga ee dacwadda, ilaa wax muhiim ah laga arkayo, dhammaantood waxaa isha lagu wada hayaa Pennsylvania. Haddii farqiga uu dhaw yahay, tartanka Maxkamadda Sare oo uu ku guuleysta ayaa caawin kara Trump.
Haddii farqiga guushu u janjeedho dhanka Biden, kiiska Pennsylvania wax macno ah ma lahan. Waxaana kooxda sharciga u qaabbilsan ay awoodda saari doonaan gobollada kale.
Dhanka kale waxaa goor dhawayd hadlay musharraxa xisbiga Dimuqraaddiga Joe Biden.
Ka hor intii aanu hadlin Biden, Donald Trump ayaa ka digay in ninka la tartamaya ee Xisbiga Dimuquraadiga, Joe Biden, uu sheegto guusha doorashada madaxtinimada Mareykanka. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku gooddiyey in caqabadaha xagga sharciga ah ay hadda uun bilow yihiin. Madaxweyne Trump laftiisu ayaa hore u sheegay inuu ku guuleystay, saacado uun kaddib maalintii codbixinta.
Weli waxaa socota in la tirinayo codadka intii hadhay, Mr Biden wuxuu ku dhow yahay inuu ku guuleysto gobolka muhiimka ah ee Pennsylvania , taas oo ka dhigan in uu furan yhay albaabka lagu galo Aqalka Cad ee looga taliyo dalkaasi. Wuxuu sidoo kale kaga horreeyaa Georgia, Nevada iyo Arizona.
Dowlada Somalia Oo Magacawday Gudiga Doorashada Xildhibaanada Somaliland
Ciidamada Cirka Itoobiya Oo Bilaabay Duqeyn Ay Ka Fulinayaan Gobolka Tigreeda Iyo Abiy Ahmed Oo Ka Hadlay
Puntland Shaacisay In Ay Gacanta Ku Dhigtay Hub Sharci Daro Ah Iyo Nuucyada Hubkaasi
Dibadbaxyo Lagaga Soo Horjeedo Natiijada Doorashadii Guud Ee Ciraaq Oo Ka Dhacaya Dalkaasi
Bnnstaff Bnnstaff November 27, 2021
Dowlada Somaliya Oo Ciidamo Badan U Dirtay Xaduudka Ay La Wadaagto Kenya Iyo Kenya Oo Walaac Ka Muujisay
Bnnstaff Bnnstaff December 16, 2020